Ukuphupha ngeSaturn Discover Discover Discover Online ▷ ➡️
Iphupha ngoSaturn. Yintoni ebangela amaphupha? Amaphupha awasoloko ethetha oko amele kona. Apha sichaza ukutolikwa kwamaphupha aqhelekileyo.
ISaturn yiplanethi enegesi kwaye iplanethi yesithandathu kwinkqubo yethu yelanga. Yeyona yesibini ngobukhulu emva kweJupiter. Ngenxa yemisesane yayo ebonakalayo ebonakalayo, enokubonakala kwiteleskopu encinci, ikwabizwa ngokuba yiplanethi yomsesane.
Nangona iSaturn ingaphezulu kwe-1,65 yezigidi zeekhilomitha ukusuka eMhlabeni, inokubonwa ngeliso lenyama xa isibhakabhaka ebusuku sicacile. Ke ngoko, yayisele isaziwa ngaphambi kokuba iteleskopu yokuqala yenziwe. USaturn ubizwa ngegama lothixo wobutyebi waseRoma kunye nesivuno.
Kodwa nguwuphi umyalezo uSaturn awuzisayo njengomqondiso wephupha? Ungatolikwa njani lo mfanekiso uphupha kwaye ufuna ukusilumkisa ngantoni?
1 Uphawu lwephupha «uSaturn» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «uSaturn» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «uSaturn» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «uSaturn» - ukutolikwa ngokubanzi
Umfanekiso ephupheni "uSaturn" unokuba ngu uvakalelo lwesibini ngaphakathi kwengcaciso ngokubanzi yephupha. Umphuphi uziva erhoxisiwe ebomini bakhe kwabanye abantu. Unoluvo lokuba akanomdla njengabanye abantu.
Ukongeza, lowo uleleyo ufumana ingqalelo encinci kunaye omnye umntu kwindalo yakhe. Kubonwa njengeplanethi ephupheni, umntu ophuphayo kufuneka azi ngempembelelo ethintelayo ebomini. Ke ngoko, kuya kuba sengqiqweni ukukhathalela lo mbandela kwaye uzame ukuwususa.
Ukuba ujonga iSaturn ngeteleskopu ngelixa uleleyo, ufumana uphawu lwe ingxaki obujikeleze kubo bonke ubomi. Obu bunzima bunefuthe lokuthatha isigqibo kwimeko yangoku yobomi yalowo uchaphazelekayo. Ukuba umphuphi ubhabha ngathi ngusomajukujuku onerocket ukuya kuSaturn ephupheni lakhe, emva koko uboniswa umnqweno wakhe wokoyisa imida esele ikho. Oku kusenokubonisa isidingo se- utshintsho Inzima ebomini.
Ukuba amakhonkco eSaturn aphambili kwiphupha njengophawu lwephupha, oku kufanele ukutolikwa njenge uphawu oluqinisekileyo ngekamva lomntu uleleyo. Ukuba uthixo waseRoma uSaturn uyavela, oku kunokuba, ngokokuchazwa ngokubanzi kwamaphupha, malunga nomnqweno wokuphumelela kunye butyebi.
Uphawu lwephupha «uSaturn» - ukutolikwa kwengqondo
Ukutolikwa kwengqondo kwamaphupha kutolika iplanethi iSaturn njengento kwi elidlulileyo yalowo uleleyo. Umphuphi ebexakeke yinto ixesha elide. Nangona kunjalo, awukenzi ngokwangoku.
Mhlawumbi ngasemva kwephupha elinje kukwakho imeko efihlwayo ngumphuphi kwaye udlulile. Awuhoyanga ngokwaneleyo emntwini.
Kubonwa njengeplanethi engaqhelekanga, uphawu lwephupha "uSaturn" unokulumkisa nangefomu yobomi engahambelani neyakho. Nangona kunjalo, kuya kuba kufanelekile ukuba abaphuphi bajonge ngakumbi oku.
Imibala etyheli kunye neorenji ihlala yabelwa uSaturn. Ukuba le mibala ibonisa iinkcukacha ezifanelekileyo zephupha, izinto ezinophawu "lwemibala" yephupha kufuneka zisetyenziswe.
Uphawu lwephupha «uSaturn» - ukutolika kokomoya
Inqanaba elidlulayo lohlalutyo lwamaphupha lijonga uphawu lwephupha "uSaturn" njengomboniso we Amandla aquka onke amandla echaphazela bonke abantu nezinto. Umphuphi kufuneka awakhumbule la mandla ukuze awaqonde ngcono kwaye awasebenzisele ukuthanda kwakhe.